Ks-012 fithem yemitambo mitambo isina waya mahedhifoni bluetoo ...
Fithem ks-011b isapinda mimhanzi isina waya bluetooth n ...
Fithem Ks-009SBluetooth isina waya yekutamba isina mvura s ...
Fithem ks-020 Makaralı Wireless earphone webasa chikepe ...
Fithem ks-016 Wireless redhiyo redhiyo bhandi MAKARALI USB Chi ...
FITHEM KS-017 isina waya bhandi bhuruu yemusoro-c plug bhatiri inogona kutsigira yakakura-kugona mutambo wefoni
Bhatiri i110mAh inogona kutamba Mumhanzi 8-10 maawa kana yakanyanya-refu sevhisi isina mvura IPX5 CE, BIS uye dzakateedzana dzakabatana chitupa chinogona kuvimbisa mhando yayo. Earphone Center Kudzora Neck Hang Nzvimbo iri rectangular dhizaini bhatani nzvimbo iri yakawanda dhizaini njere pfungwa zvakanyanya kuita kuti mushandisi pfungwa yekubata yakanyanya kupfava uye kugadzikana kwepakati kudzora matatu mabhatani akareruka uye akareruka wedzera kiyi kurongedza kumusoro kutama kukuru maviri pamberi rwiyo, kiyi kudzikisira iri kugadzirisa pasi. Kudzvanya mbiri rwiyo kumashure. Middle Bhatani ibhatani rekumbomira kana mimhanzi ichirira. Kudzvanya kaviri ndiko kutanga bhatani
FITHEM KS-015 isina waya yemusoro inokwezva inokwezva switch headphone nekukurumidza kuchaja Bluetooth headphone
Iyi ks-015 ndiyo yazvino vhezheni yeimba yangu zvakare ine yemagineti ekumhanyisa basa nekukurumidza kuchaja mashandiro kuitira kuti zvinyatso kusangana nezvinodiwa zvemusika, kugadzirisa zvinhu zvinoshanda zvechigadzirwa zvakare kusangana nezvinodiwa neruzhinji rwevatengi.
FITHEM KS-010 Wireless Makaralı headphone yakakura inokwana nekukurumidza kubhadharisa ODM chimiro chefoni
Chigadzirwa Chinyorwa Nhanganyaya: Silica Gel zvinhu kuseri kwemutsipa bhandi nhepfenyuro dhizaini yekugadzira munzeve yakanyorovera uye kuisa nzeve neNyanga kunogona kuzadzisa mhedzisiro yekudzora ruzha rwemuviri mushure mekunge bhanhire remutsipa raitawo nyanzvi yekuyedza nharembozha isina mvura zvakare yakanaka kwazvo IPX5 nhare mbozha yakazara ndeyegoridhe reshiyo dhizaini. Kune matatu mairi eeearbuds akaturikidzana neanoshandisa-ane hushamwari nzeve kuwedzera mushandisi kufarira. Dzazvino TYPE-C yekuchaja chiteshi.
Fithem Ks-816 Wireless MAKARALI USB tws headset yakaderera-treble headset inogona kuvezwa logo
Kutanga kubva pakuonekwa uye kupera nehunhu, fekitori yakavanzika modhi / rutsigiro logo kuita / Bluetooth 5.0 / IPx5 isina mvura HIFI kurira kwemhando yepamusoro, retro matte magadzirirwo, isu tiri muenzaniso wakasanganiswa weindasitiri nekutengeserana nechikepe, isina-kukuvadza mhando yemhando, yakapfava uye inoyevedza kuteerera kwakachena Izwi reKunyarara.
Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss bhoti Leisure yemitambo mahedhifoni
Mutsipa wakarembera chikamu chakagadzirwa nesilicone zvinhu zvakapfava, uye iyo mbiri bhatiri inogona kuwedzera nguva yekushandisa.
Iyi ks-020 inoumbwa ne bk: 3200 chip, uye iyo vhezheni yeBluetooth iri 5.0. Giredhi isina mvura IPx5.
Yakareruka uye inotakurika isina waya kunakidzwa. Neckband wireless bluetooth headset isina giredhi isina mvura IPx5 chip QCC3003 / 3024 kana BK3266 mabhatiri maviri anogona kuita nguva yekutamba yakareba. Isu tiri indasitiri uye yekutengesa kambani ine chigadzirwa chitupa senge CE nezvimwe zvitupa.
Ks-012 fithem yemitambo mitambo isina waya yemusoro bluetooth neckband nhare mbozha IPX5 isina mvura nhare
• Chaiyo yakakura-inokwana bhatiri dhizaini yehurefu hupenyu hwebhatiri
Kuvandudza kutsva kweBluetooth 5.0, kubatana kwakadzikama
• Hutsva hwakagadziridzwa mhando yemutsindo, ichiwedzera kufamba
• IPx5 isina mvura, yakadzika isina mvura uye isina ziya
• Heavy bass, binaural stereo kurira
Ks-008 fithem Isina mvura ishe yemitambo isina waya bluetooth headset uye chikepe headset akanaka mubatsiri wemitambo uye yekuzorora hofisi
1. Chigadzirwa sumo: iyo tambo chimiro inogona kupeta izvo zvinhu pamadiro
2. Iyo isina mvura IPx5 system inodzivirira zvirinani mahedhifoni
3. Teerera wakasununguka 3D yakatenderedza kurira mhedzisiro, inonyudza, yakasarudzika mimhanzi runako
Fithem ks-011b isina mvura mimhanzi isina waya bluetooth mutsipa yakaturika yemitambo mahedhifoni
Chimiro chechigadzirwa iyi tambo yesilica gel. Rudzi urwu rwemahedhifoni harunzwe huremu hwemusoro kana wapfeka pamutsipa.
Fithem Ks-009SBluetooth isina mitambo yemitambo isina mvura uye yekuzorora mahedhifoni epamba
Kufananidza nemumhanzi wakanaka paunenge uchiekisesaiza kunogona kuita kuti kurovedza muviri kusachinja. Sarudza isina waya mitambo yemitambo yeBluetooth inoita kuti ugare wakasununguka, kuitira kuti ugone kunzwa hupenyu hwakagwinya munguva yako yekuzorora, uye unogona kubvisa zvisungo uye woburitsa ziya rako kugutsikana kwemoyo wako. Iyo yemitambo headset yakakurudzirwa nhasi ndeye KS-009s, kuitira kuti hupenyu hwako hwemitambo husashorese.
Kero: 2nd Floor, No. 149, Shahe Avenue, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China